Ihowuliseyili siwisa ubhedu mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
I-alloys zethusi ezilahliweyo zahlulwe zaziindidi ezimbini, ezizezi: ubhedu nobhedu. I-Brass yintsimbi yobhedu ene-zinc njengeyona alloy iphambili kunye nezinto zokudibanisa izinto.
Isinyithi esingafakwanga sentsimbi sife-ukulahla-isiko ngokuthe ngqo kubhedu bokuphosa iindawo
Kubhedu oluphosiweyo, ubhedu lwe manganese, ubhedu lwealuminium, ubhedu lwesilicon, ubhedu okhokelayo, njl.njl. Zenziwa ngokongeza ezinye izinto zodidi. Iingxube zeCopper ezingenayo i-zinc njengezona zinto ziphambili zibizwa ngokuba yibhedu, njenge-tin bronze, i-aluminium bronze, i-lead bronze, kunye ne-beryllium bronze. Kwinqanaba lesizwe, kukho iintlobo ezili-9 ze-alloys zethusi, kubandakanya amabanga angama-29. Ukuphosa i-alloy yobhedu luhlobo oluthile lokuphosa izinto ze-alloy ezisetyenziswa kakhulu kushishino. Iialloys ezisekwe kubhedu zisetyenziswa ngokubanzi kumzi-mveliso wokwakha iinqanawa kunye neekhemikhali ngenxa yokuxhathisa umhlwa kumanzi amatsha, amanzi olwandle kunye nezisombululo ezithile zemichiza. Ngenxa yokuqhuba kakuhle kwe-thermal kunye nokunxiba ukunxiba, ii-alloys ezisekwe kubhedu nazo zihlala zisetyenziswa ekwenziweni kwe-sliding bushings koomatshini abohlukeneyo abathwala imithwalo enzima kunye nemingxunya ebaleka ngesantya esiphezulu.
Izinto eziluncedo zobhedu non-ayoni metal die eyahlulayo:
I-OEM yobhedu olungelulo olwenziweyo lwensimbi yokuphosa inkonzo yokuphosa-i-China i-shaba yobhedu engenzi-ntsimbi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, i-die-casting ephezulu yokuphosa ubhedu ngomgangatho ozinzileyo nothembekileyo unokuqwalaselwa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kweendawo zobhedu zokuphosa izixhobo. Ukongeza, iimveliso zobhedu zokuphosa iimveliso zibonelela ngokungqongqo kwimigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokukhuphisana ngexabiso lobhedu lokuphosa iindawo kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Zeziphi izinto ezenziwe ngobhedu ekubunjweni kwamalungu
Izinto eziluncedo Ouzhan Brass Die Casting Service
-Zonke iimveliso zobhedu lokuphosa ngokuchanekileyo ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokweemizobo okanye iisampulu zokwenza izinto zobhedu zokuphosa ngokuchanekileyo.
Egqithileyo I-OEM yentsimbi engenasici ejika iindawo ezizenzekelayo
Okulandelayo: Custom die die ekubunjweni iindawo